မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: အလေးပြုပါ၏ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
" မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တာဝန်ကျေပြွန်ခဲ့ကြတဲ့ ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက် နံနက် ၁၀နာရီ-၃၇ မိနစ်မှာ ကျဆုံးလေပြီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေး........ ပြု....!!!!!! "
Sandaya Aung Win မှ တင်ပြပါသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကာလတွင် အသက်ပေး လှူသွားခဲ့သည့် တိုင်းပြုပြည်ပြု ပုဂ္ဂိုလ် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကို၊ အလေးပြုပါ၏။ ဓါတ်ပုံများကို ညီ ညီမငယ်များဖြစ်သော၊ @ko myoe နှင့် @momo aung တို့ ၏ facebook မှ ခွင့်တောင်းရန် မမီတော့ဘဲ ယူသုံးခဲ့ ရပါသည်။
အလေးပြုပါသည် ဟု အမည်ရသော တေးသီချင်းကို ဂီတာ တင်အုံး ရေးစပ်၍ (ဒေါ်) မေလှမြိုင် သီဆိုခဲ့ပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:08 PM